KuStudio Display unogona kubatanidza iPad ne USB-C, asi kwete ese | Nhau dze iPhone
Unogona kubatanidza iPad ne USB-C kuStudio Display, asi mamwe mamodheru chete
icho chikuru chitsva chechiitiko cheApple nezuro masikati pasina mubvunzo chaive icho Vadivelu Comedy MacStudio uye inoenderana neyayo monitor Vadivelu Comedy StudioDisplay. Chidzitiro chepamusoro-chekuita, kwaunogona kubatanidza iPad ne USB-C yekubatanidza. Asi zvinosuruvarisa, hazvienderane nema iPads ese ane chiteshi ichi.
Pama iPads ese atova ne USB-C yekubatanidza, matatu chete ndiwo anowirirana neiyo Studio Display itsva. Simply for the Transmission speed yedata iyo iPad inogona kutsigira.
Nezuro michina mitsva mishoma yakaunzwa pachiitiko ichi «Peer Performance"kubva kuApple. Uye kudzamara vatanga kusvika vashandisi vakatozvikumbira, isu tinofanirwa kuzvidzora pakuverenga izvo zvatinoudzwa naApple, zvisingaite kana zvishoma.
Uye imwe yeaya maficha eStudio Display yekutarisa inoreva iyo iPads inoenderana neyakataurwa skrini, uye iyo inogona kubatana kuburikidza netambo. USB-C. Zvinoitika kuti haasi ese ma iPads ane chinongedzo chakadaro achakwanisa kushandisa Studio Display.
Sekureva kwekambani, iyo nyowani 5-inch 27K Studio inoratidza inoenderana nemhando dzeMacs dzinodzokera ku2016 MacBook Pro modhi, asi kuenderana kwayo nePads kunongogumira kune 11-inch iPad Pro, to 12,9-inch iPad Pro (Chizvarwa cheXNUMX uye gare gare) uye chitsva Chizvarwa chechishanu iPad Air.
Izvo hazvibatanidzi mamwe maPad modhi ane USB-C yekubatanidza, seyechina-chizvarwa iPad Air uye yazvino iPad mini. Dambudziko nderekuti mamodheru aya, kunyangwe aine USB-C yekubatanidza, haasvike inodiwa yekumhanyisa data muchiteshi chakataurwa.
transmission speed nyaya
iPad Pro modhi dzinotsigira Studio Display inoratidzira USB-C ine kuita kwe 10 Gbps (inozivikanwawo se USB 2.1 Gen 2), nepo chizvarwa chechina iPad Air uye iPad mini 6 inosanganisira USB 3.1 Gen 1 USB-C yekubatanidza 5 Gbps. Iyi yekubatanidza mwero inotsigira imwe yekunze kuratidza ine resolution inosvika 4K pa 30 Hz. Imomo ndimo mune dambudziko.
Kusiyana neizvi, iyo itsva iPad Air inoshandisa USB 3.1 Gen 2 yekubatanidza, iyo inopeta kaviri data yayo kuburikidza neiyo modhi yainotsiva, inofanana ne USB 2.1 Gen 2 (10 Gbps) yeanoenderana iPad Pro modhi. Naizvozvo, midziyo iyi inogona kumira kubatanidza kune Studio Display.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Unogona kubatanidza iPad ne USB-C kuStudio Display, asi mamwe mamodheru chete
Muvhidhiyo iyi unogona kuona iyo itsva iPhone 13 Pro mune yegirini
Iyo itsva iPhone SE ine kuzvimiririra kwakawanda kupfuura yakatangira